ဟိုအရင်ကတည်းက ခြောက်ပြီးသားမို့ လာမခြောက်ကြနဲ့လို့ ကြွေးကြော်လိုက်တဲ့ မိတ်ကပ် ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း) – Cele Top Stars
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေမိတ်ကပ်နဲ့ အလှ ဖန်တီးရှင် တစ်ယောက် အနေနဲ့ အနုပညာ လောက ထဲ ရောက် ရှိ လာခဲ့တဲ့ ညီညီမောင် (စမ်းချောင်း) ကိုတော့ အားလုံး သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။……… ယခုအချိန်မှာတော့ ညီညီမောင်ဟာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ ကိုသာ မက ကြော်ညာတွေကို ပါ ရိုက်ကူးလာပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေကို တစ်စတစ်စနဲ့ ဖြေးဖြေးချင်းစီ လုပ်လာကာ အနုပညာ လမ်းကို လျှောက်လှမ်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။…….
လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ ညီညီမောင်က မိတ်ကပ် နဲ့ အလှဖန်တီးတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်နေပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေကို ရပ်နားထားကာ လမ်းမထက်မှာ ပြည်သူလူထု နဲ့ အတူ အမှန်တရား ဘက်ကနေ ရပ်တည်နေတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။………. တက်နိုင်တဲ့ ဘက်ကလည်း တက်အားသမျှ အလှူဒါနလေးတွေ လုပ်နေကာ ပရိသတ်တွေ ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ထုတ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။…… ယခုအခါမှာတော့ သူရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက်မှာ ကြွေးကြော်သံ တစ်ခုကို ကြွေးကြော်လာ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအချိန်မှာ အားလုံးကတော့ အကြောက်တရားတွေ ကြားကနေ ခုခံရင်း လွတ်လပ်ပြီး……… တရားမျှတတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ဖို့ တော်လှန်နေကြတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ပေါင်းစုံက ခြောက်လှန့်နေမှုကို ဂရုမစိုက်ပဲ မိမိတို့ လိုလားတဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ရယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်း အားလုံးက အားတင်းပြီး ရှေ့ဆက် လျှောက်လှမ်းနေကြတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။……. သုသုဟာလည်း သူရဲ့ Facebook ထက်မှာ”ငါ တို့ကို လာမခြောက်နဲ့ငါ တို့က အရင်ထဲက ခြောက်ပီးသားဆိုပြီး အရင်ထဲက ခြောက်ပီးသားမို့ ခုလာမခြောက်ကြနဲ့လို့ ဟစ်ကြွေး လာတာ ကို ပရိသတ်တွေ အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ပရိသတျကွီးတို့ရမေိတျကပျနဲ့ အလှ ဖနျတီးရှငျ တဈယောကျ အနနေဲ့ အနုပညာ လောက ထဲ ရောကျ ရှိ လာခဲ့တဲ့ ညီညီမောငျ (စမျးခြောငျး) ကိုတော့ အားလုံး သိကွမယျ ထငျပါတယျ။……… ယခုအခြိနျမှာတော့ ညီညီမောငျဟာ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှေ ကိုသာ မက ကွျောညာတှကေို ပါ ရိုကျကူးလာပွီး အနုပညာ အလုပျတှကေို တဈစတဈစနဲ့ ဖွေးဖွေးခငျြးစီ လုပျလာကာ အနုပညာ လမျးကို လြှောကျလှမျးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။…….
လကျရှိ အခြိနျမှာတော့ ညီညီမောငျက မိတျကပျ နဲ့ အလှဖနျတီးတဲ့ အလုပျကို လုပျဆောငျနပွေီး အနုပညာ အလုပျတှကေို ရပျနားထားကာ လမျးမထကျမှာ ပွညျသူလူထု နဲ့ အတူ အမှနျတရား ဘကျကနေ ရပျတညျနတော ပဲ ဖွဈပါတယျ။………. တကျနိုငျတဲ့ ဘကျကလညျး တကျအားသမြှ အလှူဒါနလေးတှေ လုပျနကော ပရိသတျတှေ ပွညျသူတှေ နဲ့ အတူ ဆန်ဒထုတျဖျောထုတျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။…… ယခုအခါမှာတော့ သူရဲ့ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာ ထကျမှာ ကွှေးကွျောသံ တဈခုကို ကွှေးကွျောလာ တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ယခုအခြိနျမှာ အားလုံးကတော့ အကွောကျတရားတှေ ကွားကနေ ခုခံရငျး လှတျလပျပွီး……… တရားမြှတတဲ့ နိုငျငံဖွဈဖို့ တျောလှနျနကွေတာ ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘကျပေါငျးစုံက ခွောကျလှနျ့နမှေုကို ဂရုမစိုကျပဲ မိမိတို့ လိုလားတဲ့ လှတျလပျမှုကို ရယူသှားမှာဖွဈကွောငျး အားလုံးက အားတငျးပွီး ရှဆေ့ကျ လြှောကျလှမျးနကွေတာ ပဲ ဖွဈပါတယျ။……. သုသုဟာလညျး သူရဲ့ Facebook ထကျမှာ”ငါ တို့ကို လာမခွောကျနဲ့ငါ တို့က အရငျထဲက ခွောကျပီးသားဆိုပွီး အရငျထဲက ခွောကျပီးသားမို့ ခုလာမခွောကျကွနဲ့လို့ ဟဈကွှေး လာတာ ကို ပရိသတျတှေ အတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေး လိုကျတာ ပဲ ဖွဈပါတယျနျော။